Sawirka Farshaxanka Farshaxanka iyo Abuureha Button ee Mac iyo PC | Abuurista khadka tooska ah
Araceli lauret | | Kaararka kartoonka
Qoraalka Farshaxanka Hoyga
Tan iyo markii aan ka soo dejistay Qoraalka Farshaxanka Mac-keyga in ka badan 7 sano ka hor waa mid ka mid ah aaladaha aan sida ugu badan ugu isticmaalay xirfad ahaan xallintooda badhamada impromptu, astaamaha, iyo astaamaha boggaga dhismaha ka hooseeya ama buugaagta demo. Waa codsi aad u fudud, oo sahlan in la isticmaalo iyo fursado badan. Nooca bilaashka ah ayaa ka badan inta ku filan si dhakhso leh loogu hagaajiyo astaanta ama badhanka aad jeceshahay, iyo sidoo kale sawirada fudud iyo vektorka ka dibna aad ku keydin karto faylalka png aan lahayn asal ama daahfurnaan. Dabcan waxaa loo heli karaa kombuyuutarka sidoo kale.
Muuqaal ahaan, Qoraalka Farshaxanka wuxuu na siinayaa daaqad shaqo iyo menu fudud oo markii aad dhex mushaaxdo ay ku siineysaa fursado badan, sida liis aad u dheer oo xarfaha ah iyo dhowr menus oo ah astaamo horay loo qaabeeyey ama tirooyin lagu qeexay mawduuc. Waxay ku shaqeysaa lakabyo leh qaab muuqaal ah oo aad u fudud oo la adeegsan karo.
Farshaxanka qoraalka tusaale
Laakiin waxa ugu caansan waa noocyo kala duwan oo qaabab adag oo la saxi karo, matte iyo gloss, oo leh suurtagalnimada abuurista cufan (defaultlakin laakiin kala duwanaansho lagu sameyn karo) iyo laydh la hagaajin karo oo lagu daydo dhalaalka. Thanks to qaababkan Waa suurtagal in lagu abuuro qaybo 3d been ah oo leh waxyaalo fudud oo sidoo kale wax laga beddeli karo qaab ahaan iyo darajo ahaanba.
Farshaxan qoraalka daaqada shaqada
Waxay bixisaa menu ah astaamaha u diyaarka ah in la isticmaalo, badhamada, astaamaha iyo astaamaha astaamaha, Lama huraan u tahay kuwa kaliya raadinaya badhan leh dhalaal uu isticmaalo, ama astaan ​​muuqaal, video, mail, telefoon, iwm. Kaliya siiya cabirka la doonayo ee pixels una dhoofi faylka.
Laakiin sidaan ku sheegay bilowgii, waa codsi in waxay bixisaa xalal degdeg ah oo wax ku ool ah, oo ah qalab loogu talagalay xirfadlayaasha. Dhanka kale, shaqooyinka aan baahida loo qabin waxay ka heli karaan qoraalka 'Text Text' aaladda saxda ah, sida ay tahay xaaladda ardayda iyo macallimiinta u baahan inay ku sawiraan astaamo ama tirooyin soo bandhigidda barta awoodda. Sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan shirkadaha yar yar ee raba inay ku soo bandhigaan astaamo ama astaamo horay loo sii qorsheeyay ama buugaggooda ku qoran, maxaa yeelay waxay leedahay maktabad hodan ah oo qaabab ah, kuwaas oo sidoo kale wax laga beddeli karo, iyo inay yihiin kuwo dareen leh, uma baahna barasho hore, kaliya gala oo bilow in la shaqeeyo.
Waxaad ka arki kartaa Qoraalka Farshaxanka oo aad kala soo bixi kartaa halkan: Qoraalka Farshaxanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » QORAALKA FARSAMADA: Astaamaha iyo badhannada naqshadeeyayaasha leh Mac iyo PC
Soo-saare walxaha internetka, bilaash iyo alfa!